I-Eurovision 2018-2019, yonke into ekufuneka uyazi: imihla, indawo kunye nokunye! | Ndinike ixesha lokuphola
UGabriela moran | | Ihlaziywe 04/01/2019 11:02 | Iindaba zomculo, Iimvumi, ngokubanzi, umculo
Njengesiqhelo, iYurophu ibhiyozela umnyhadala wengoma yakudala ebizwa ngokuba yi-Eurovision apho onke amalungu e-European Broadcasting Union (i-EBU) athatha inxaxheba. Ngumnyhadala wonyaka womculo kunye nabaphulaphuli abaninzi emhlabeni: Ifikelele kubaphulaphuli abazizigidi ezingama-600 kwilizwe liphela! Yasasazwa ingaphazanyiswanga ukusukela ngo-1956, yiyo ke le yeyona tumente indala yeTV kwaye isasebenza, yiyo loo nto lo mnyhadala wanikwa irekhodi leGuinness ngo-2015. I-Eurovision 2018 yenzeka eAltice Arena kwisixeko saseLisbon, ePortugal ngoMeyi 8, 10 no-12.
Umnyhadala wawusaziwa ngokukhuthaza ikakhulu uhlobo pop Kutshanje iintlobo ezahlukeneyo ziye zafakwa njenge tango, arabic, umdaniso, rap, rock, punk kunye umculo elektroniki. Funda ukuze ufumane yonke into eyenzekileyo kwi-Eurovision 2018!
1 Umxholo kunye nokuphononongwa ngokubanzi kwe-Eurovision 2018
1.1 Ndulela amanqam 1
1.2 Ndulela amanqam 2
2 Inqaku elinomdla malunga ne-eurovision ...
3 Zilungiselele i-Eurovision 2019!
Umxholo kunye nokuphononongwa ngokubanzi kwe-Eurovision 2018
Isilogeni esona siphambili sasithi "Konke okubhabhayo!" iguqulelwe kwiSpanish njenge "Bonke abakwibhodi." Inkqubo ye- I-Thematic ijongana nokubaluleka kwemisebenzi yolwandle nolwandle ebonisa into ebalulekileyo kuqoqosho lwelizwe elisingathiweyo. Umfuziselo umele inkumba, ehambisa ixabiso lokwahluka, intlonipho nokunyamezelana.
Umsitho wenziwa ngu USilvia Alberto, uCatalina Furtado, uFilomena Cautela kunye noDaniela Ruah. I-Eurovision 2018 ibine ukuthatha inxaxheba okukhulu kwamazwe angama-43 ewonke! Ophumeleleyo ibililizwe lakwaSirayeli ngengoma ethi "Toy" eculwa yimvumi yakwa-Israeli kunye no-DJ Netta Barzilai. Ingoma yacocwa njengenye yeebhaso zintandokazi kwiinyanga ngaphambi komnyhadala. Umnyhadala ngamnye uneeseshoni zokuphelisa: ii-2 semi-finali kunye nomdlalo wokugqibela omkhulu kwiintsuku ezahlukeneyo zomsitho.
Phambi kokuqala komnyhadala, kulisiko ukwenza umzobo wokugqibela. Kwindaba ye IPortugal, iSpain, iJamani, i-United Kingdom, i-France kunye ne-Italiya bebevele bedlulele esiphelwenil. Amanye amazwe akhuphisana ngokuphumelela indawo yawo kumdlalo wokugqibela wamagqibela kankqoyi ngoMeyi 8 nowe-9 apho Amazwe ali-10 aneevoti eziphezulu kumdlalo wamanqam wokugqibela angene kumjikelo wokugqibela nge-12.
Ndulela amanqam 1
Zaziqulethe amazwe ali-19 kunye 8 ngoMeyi. Uluhlu lwamazwe akhuphisanayo ngobo busuku bendibano ye-semifinal 1 ye-Eurovision 2018 imi ngolu hlobo lulandelayo:
Ngamazwe ali-10 kuphela afumene indlela yokuya kumdlalo wokugqibela ngolu hlobo lulandelayo lokukhetha iivoti: I-Israel, iSipro, iRiphabhlikhi yaseCzech, iOstriya, i-Estonia, iIreland, iBulgaria, iAlbania, iLithuania neFinland.
Iingoma ezintlanu abazithandayo kunye neevoti zabo zezi zilandelayo:
Ithoyi. Umdlalisi: INetta (Israel) - amanqaku angama-283
Umlilo. Umdlali: Eleni Foureira (eSipro) - amanqaku angama-262
Xo ka kum. Umenzi obalaseleyo: UMikolas Josef (Czech Republic) amanqaku angama-232
Akukho mntu ngaphandle kwakho. Umdlali: UCesár Sampson (Ostriya) - amanqaku angama-231
La Forza. Umenzi obalaseleyo: Alekseev (Belarus) - amanqaku angama-201
Ndulela amanqam 2
Inkqubo ye- 10 ngoMeyi kwaye amazwe ali-18 athathe inxaxheba, abo balwa nabo badweliswe ngezantsi:
Inqanaba lokhetho lwamazwe ali-10 aqhubele phambili kumdlalo wokugqibela imi ngolu hlobo lulandelayo: INorway, iSweden, iMoldova, iAustralia, iDenmark, iUkraine, iNetherlands, iSlovenia, iSerbia neHungary.
Ukuvota okuphezulu kwesi-5 kumdlalo wokugqibela wesibini kubonisiwe apha ngezantsi:
Yile ndlela ubhala ngayo ingoma. Umenzi: Alexander Rybak (Norway) - amanqaku angama-266
Ukudanisa. Umdlali: UBenjamin Ingrosso (eSweden): amanqaku angama-254
Usuku lwam lweThamsanqa. Umenzi: DoReDos (Moldova) - amanqaku angama-235
Sinothando. Umdlali: UJessica Mauboy (Australia): amanqaku angama-212
Umhlaba oPhakamileyo. Umenzi obalaseleyo: URasmussen (eDenmark) - amanqaku angama-204
Inxalenye yemimangaliso emikhulu yobusuku ithathwa njengokungafaneleki kwePoland, iLatvia neMalta ezazineengoma ezaziphakathi kweenyanga ezintandathu ezidlulileyo ukuya kumdlalo wokugqibela wokhuphiswano. Kwelinye icala, i-Eurovision 2018 yayilushicilelo apho iRussia neRomania zazingafanelekanga ukuba ngabokugqibela okokuqala kwimbali.
Usuku olukhulu lokugqibela lwenzeka 12 ngoMeyi. Abathathi-nxaxheba babenziwe ngamazwe ali-10 ahlelwe ukusuka kumdlalo wokugqibela nowesibini, ukongeza kula mazwe mathandathu ayephumelele ngokuzenzekelayo. Lilonke inani Amagqibela kankqoyi angama-26 akhuphisana kwi-Eurovision 2018 kwaye banika umboniso omkhulu kubabukeli.
Itheyibhile yezikhundla zokugqibela ze-2018 Eurovision ethathela ingqalelo abagqwesileyo abangama-26 imi ngolu hlobo lulandelayo:
Ithoyi. Umdlalisi: INetta (Israel) - amanqaku angama-529
Umlilo. Umdlali: Eleni Foureira (eSipro) - amanqaku angama-436
Akukho mntu ngaphandle kwakho. Umdlali: UCesár Sampson (Ostriya) - amanqaku angama-342
Uyandiyeka Ndihambe Ndedwa. Umdlali: UMichael Schulte (eJamani) - amanqaku angama-340
Non mi avete fatto niente. Umdlali: I-Ermal Meta kunye neF Fabrizio Moro - amanqaku angama-308
Xo ka kum. Umenzi obalaseleyo: UMikolas Josef (Czech Republic) amanqaku angama-281
Ukudanisa. Umdlali: UBenjamin Ingrosso (eSweden): amanqaku angama-274
La Forza. Umenzi obalaseleyo: Alekseev (Belarus) - amanqaku angama-245
Umhlaba oPhakamileyo. Umenzi obalaseleyo: URasmussen (eDenmark) - amanqaku angama-226
Nova Deca. Umdlalisi: I-Sanja Ilić kunye neBalkanika (eSerbia) - amanqaku angama-113
Xa Simdala. Umdlali: Ieva Zasimauskaitė (Lithuania) - amanqaku angama-181
Inceba. Umdlalisi: Madame Monsieur (France) - amanqaku angama-173
Amathambo. Umenzi: EQUINOX (Bulgaria) - amanqaku angama-166
Yile ndlela ubhala ngayo ingoma. Umenzi: Alexander Rybak (Norway) - amanqaku angama-144
Kunye. Umdlali: URyan O'Shaughnessy (eIreland) - amanqaku angama-136
Ngaphantsi kweladi. Umenzi obalaseleyo: Mélovin (Ukraine) - amanqaku angama-130
Isaphuli mthetho kwi 'Em. Umdlali: Waylon (eNetherlands) - amanqaku angama-121
Sinothando. Umdlali: UJessica Mauboy (Australia): amanqaku angama-99
Viszlát nyár. Umdlalisi: I-AWS (eHungary) - amanqaku angama-93
Hvala, ne! Umenzi obalaseleyo: Lea Sirk (Slovenia) - amanqaku angama-64
Ingoma yakho. Itoliki: UAlfred García no-Amaia Romero (eSpain) banamanqaku angama-61
Isaqhwithi. Umdlali: ISuRie (eUnited Kingdom): amanqaku angama-48
Izilo. Umdlali: Saara Aalto (eFinland) - amanqaku angama-46
Okanye uJardim. Umdlali: UCláudia Pascoal (ePortugal) - amanqaku angama-39
Phakathi kolindelo olukhulu, impikiswano kunye noluhlu lweentandokazi, kwabhengezwa ukuba ingoma enkulu yokuphumelela ebusuku: Toy! Yenziwe ngu-DJ / imvumi kunye neNetta ngenqaku lokutshayela. Ukusebenza kwakhe kugxile kwinkcubeko yaseJapan, eyadala impikiswano xa wayezama ukwenza inkcubeko yaseJapan okoko iimpahla, iinwele kunye nokwenza izithambiso ngokucacileyo kwakuphefumlelwe yinkcubeko yaseJapan.
Inqaku elinomdla malunga ne-eurovision ...
Ukongeza kwizityholo malunga nokusebenza kukaNetta Barzilai, bekukho nezinye izinto ezinike okuninzi ekuthetheni ngazo ngexesha lokugqibela. Injalo imeko ye- Ukusebenza kukaSuRie, apho fan yathatha inqanaba yathatha imakrofoni ukuveza ezinye zeengcinga zakhe zopolitiko, umntu kamva wachongwa njengetshantliziyo lezopolitiko. Ikomiti emva koko yanika uSuRie intsebenzo ephindiweyo, nangona kunjalo unikezelo lwaliwe kwaye umboniso waqhubeka neshedyuli ebekiweyo ngaphambili.
Ngakolunye uhlangothi, I-China yaphicotha ezinye iinxalenye zomdlalo wabakhuphiswano kuba babonakalise iisimboli okanye imidaniso ebhekisa kubufanasini Ngexesha lokugqibela kumdlalo wamanqam wokuqala we-Eurovision 2018. Isizathu sokuba kutheni U-EBU wayirhoxisa ikhontrakthi yakhe nesikhululo esikuloo lizwe Ngokuphikisa ukuba ayenzi iqabane elungelelaniswe neenqobo ezibandakanyiweyo ekujongwe ukuba zikhuthazwe kwaye zibhiyozelwe ngomculo. Iziphumo yaba ukunqunyanyiswa kokudluliselwa kowandulela owamanqam wesibini kunye nowokugqibela kumdlalo welo lizwe.
Zilungiselele i-Eurovision 2019!
SinoSirayeli njengomkhosi wethu olandelayo! U-Israyeli usebenze njengelizwe elisingathiweyo amatyeli aliqela: ngo-1979 nango-1999.
I-EBU ibhengeze nge-13 kaSeptemba 2018 ukuba isixeko esiya kubamba umsitho siya kuba I-Tel Aviv ye-Eurovision 2019. Kuya kwenzeka ngemihla Ngomhla we-14, 16 nowe-18 kuMeyi kwiziko leNgqungquthela yeZizwe ngezizwe (Expo Tel Aviv).
Ukhuphiswano luya kubakho kwi I-Pavilion 2 yeZiko leNgqungquthela leZizwe ngezizwe elinabantu abamalunga ne-10 lamawaka. Ukujonga le nyaniso, i-Eurovision 2019 iya kuba nesikhundla esincinci kunoluhlelo lwangaphambili eLisbon. Nangona kunjalo, elinye lawona maphephandaba makhulu kwa-Israyeli labhengeza loo nto Kuphela ngamawaka amane eetikiti aza kuthengiswa. Oku, kuba indawo yamawaka amabini abantu iya kuvalwa ziikhamera kunye neqonga, ngelixa abanye baya kugcinelwa i-European Broadcasting Union.
Ngokubanzi ukuthengiswa kwamatikiti kuqala phakathi kwenyanga yoMnga neyoMqungu. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba umhambisi kunye namaxabiso ayahluka minyaka le, ke kuya kufuneka wazi naziphi na iindaba. Amaxabiso aphakathi aphakathi ane Ixabiso eliphakathi lama-euro angama-60 kwiseminal nganye kunye ne-150 ye-euro yokhuphiswano lokugqibela.
Musa ukuphelelwa lithemba ukuba awufumani itikiti lakho kumjikelo wokuqala okanye wesibini. Ukusukela kolu hlobo lomsitho, amatikiti anokugcinelwa imihla ekufutshane nomsitho ngezizathu zokuthengisa ukupapasha umsitho "uthengisile" okanye "uthengisile." Nangona kunjalo, ukwandisa amathuba okuya kukhuphiswano, kunjalo Uyacetyiswa ukuba ujoyine iiklabhu zabalandeli ezisemthethweni ze-Eurovision kuba banenxalenye enkulu yamatikiti abekelwe amalungu abo. Indawo ihlala ikufutshane neqonga!
UGal Gadot, umdlali weqonga odumileyo wase-Israeli wamenywa ukuba abambe i-Erurovisión 2019, inxaxheba yakhe ayikaqinisekiswa okwangoku.
Kwakukho izixeko ezithathu ezazinokudlala indima yokuba ngumamkeli zindwendwe: I-Tel Aviv, i-Eilat kunye ne-Jerusalem, le yokugqibela yathatha inxaxheba njengendawo yokubhiyozela umnyhadala owawubanjelwe kwakweli lizwe linye. Abaququzeleli balo msitho bayangqina ukuba iTel Aviv ingqinelana nesixeko kunye nesona sicelo siphambili kulo msitho, nangona zonke izindululo bezingumzekelo. Ukuza kuthi ga ngoku umnyhadala une ukuthatha inxaxheba kwamazwe angama-30.
Ngakolunye uhlangothi, kukho imiboniso ethile echasene no-Israyeli njengendawo yokhuphiswano. U-Israyeli ujongene a imeko enzima yezopolitiko, ke esona sizathu siphambili sokungavisisani sisimo sayo sezopolitiko kunye nezenzo ezizenzileyo ngokuchasene namanye amazwe. Amazwe anje nge I-United Kingdom, iSweden kunye ne-Iceland zithathela ingqalelo ukuba ukubamba i-Eurovision kwelo lizwe kukwaphula amalungelo abantu kwaye bacebisa ukuba kungabandakanywa kuloo msitho.
Ukongeza, i I-EBU ikhuphe iingxelo ezisemthethweni ezibhengeza ukuba ukhuseleko lomsitho lubaluleke kakhulu kwizicwangciso zokuqhubeka nezifundo zabo. Inkulumbuso kulindeleke ukuba iqinisekise ukhuseleko kuyo yonke imiba, kunye nenkululeko yokuhamba ukuze bonke abalandeli abanqwenela babekho kulo msitho nokuba ngabaluphi na uhlanga. Bacinga ukuba ukuhlonipha amaxabiso Ukubandakanywa kunye neyantlukwano zibalulekile kwimisitho ye-Eurovision kwaye kufuneka ihlonitshwe ngawo onke amazwe abamba iindwendwe.
Ngaphandle kwamathandabuzo, umculo umanyanisa abantu, iinkcubeko kunye nokulungelelanisa iimvakalelo ukuze izihlwele ezikhulu zidibanise ngeengoma kunye namazwi. Ndiyakumema ukuba undwendwele iphepha elisemthethweni le- I-Eurovision ngeenkcukacha ezithe kratya kuhlelo luka-2018 kunye nenkqubela phambili yonyaka ozayo.
Ungalibali ukubona iinkcukacha zolu hlelo lulandelayo kuya kubakho okuninzi ekunokuthethwa ngako!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » ngokubanzi » I-Eurovision 2018-2019
Iifilimu ezigqwesileyo zeMafia
Abalawuli befilimu baseSpain